NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering | Pejy 2328 amin'ny 36660 | 2020 NAB Show News: Live Streaming, Podcasting, Engineering Broadcast, TV & Radio Technology ary ny famoahana vaovao momba ny famokarana. NAB Show 2020.
Ireo ekipa famokarana aorian'ny famokarana dia miresaka momba ny paikady amin'ny fanatanterahana ny asan'ny haino aman-jery ankehitriny anio axle ai miara-miasa amin'ny fe ...
Digital Media Production Mpandrindra
Comments Off amin'ny Coordinator Digital Media Production
- Ny mpandrindra ny famokarana dia hitatitra any amin'ny Digital Media Production Manager - tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny logistics momba ny famokarana rehefa mifandray amin'ny fampisehoana an-tsehatra, fampisehoana an-dàlambe sy ny zava-mitranga - Miaraha amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mba hiantohana ny ekipa amin'ny tifitra, ary hanampy amin'ny fitifirana ny logistics avy amin'ny Manomana mivantana amin'ny Mpanjifa mpamokatra mba hamenoana ny fepetra takian'ny teti-bola sy ny fanaraha-maso ny teti-bola - Miara-miasa amin'ireo mpivarotra mba hanomezana tolotra, hamoronana fividianana fividianana, fikarakarana ary fitadiavana faktiora - Miara-miasa amin'ny mpamokatra ny orinasa hanavao, handamina ary hampiditra ny data amin'ny fandaharanasa mahaleotena - Mifanaraha akaiky amin'ireo sampana manaraka: Special ...
Comments Off amin'ny Executive Account Executive (fandaharana amin'ny teny espaniola)
Ny WFAN AM / FM ary ny tranonkala radio vaovao ao NewYork Yankees, dia mitady mpitantana ny kaonty ara-panatanjahantena hisolo tena ny fampielezam-peo amin'ny teny Espaniola ho an'ny Radio YANKEES Radio YANKEES. Ity toerana ity dia mitaky asa mafy, manomboka ny tenany, ary ny mpivarotra mivantana amin'ny orinasa. Tsy maintsy mahatakatra sy manaja ny maso sy ny fomba ahafahana miditra. Ny mpangataka dia tokony hanana traikefa farafaharatsiny amin'ny iray na maromaro amin'ireto manaraka ireto: Fampiroboroboana ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena, Radio Hispanika, Fampandrosoana ny orinasa, fivarotana hevitra, ary / na strateptika / MultiLevel. Ny fanalahidin'ity toerana ity dia ny fanantenana sy ny fivoaran'ny fifandraisana amin'ny fanapahan-kevitra manan-danja eo an-toerana sy eo amin'ny faritra.
Comments Off amin'ny Mpamorona Mpamokatra
Mikaroka mpanao famoronana isika ho an'ny andro 6 amin'ny fitifirana any New York City (nanomboka tamin'ny 8 X febroary ka hatramin'ny 13th). Mila ny Mpamorona isika mba hiara-miasa akaiky amin'ny tale sady DP amin'ny endri-tsoratry ny horonantsary. Mpampianatra goavam-be, manan-talenta ary matanjaka izahay ary ny tanjonay dia ny handefa ity sarimihetsika fohy ity ho Festival! Izahay dia nahazo diplaoma amin'ny sekolim-panjakana frantsay "ESRA" hitifitra ny sarimihetsika farany. Manana fitaovana matihanina isika (Alexa Camera, sns) .. Ny famokarana dia manomboka amin'ny voalohandohan'ny volana Janoary izay mety hanombohana ny famolavolana araka ny fandaharam-potoanany.
Fampitana Senior Design Artist
Comments Off momba ny Artista Design Broadcast Senior
Ireo mpanakanto sary ao amin'ny Studio City dia mamolavola singa maro isan-karazany ho an'ny fampisehoana hita matetika amin'ny fahitalavitra amin'ny ankabeazan'ny tokatrano 100 tapitrisa. Toerany tokana io. Miasa haingana dia haingana ny mpanakanto. Hiasa toy ny talen'ny artista anao ianao, mpanakanto sy mpanakanto famokarana. Ity dia tombontsoa lehibe ho an'ny mpamorona iray hanana fifehezana famoronana amin'ny tetik'asa ary ho ampahany amin'ny fizotran'ny famoronana manontolo. Ny mpifaninana mety dia tokony ho manam-pahaizana manokana amin'ny Cinema-4D sy aorian'ny effectures amin'ny sehatra Mac OS.
Comments Off amin'ny mpitantana ny famokarana
Production Manager - The Sheen Center dia fanjakana vaovao amin'ny rafi-javakanto Off-Broadway izay misy sinema roa, studio famerenana efatra ary efitrano fampidirana, fanokafana ny afovoan-tanàna tany am-piandohan'ny 2014. Ny talen'ny famokarana dia miandraikitra ny lafiny teknika rehetra amin'ny toerana Sheen Center ary ireo adidy mifandraika. Ny PM dia hiasa sy hitahiry ary hiaro ny otrikarin'ny teknolojia amin'ny teatra (ao anatin'izany ny jiro, ny feo ary ny fampitaovana fitaovana), hanomezana loharanom-bola ho an'ny sehatra Sheen Center miankina amin'ny filàn'ny mpanofa trano, mandrindra ny filan'ny teknolojia manofa trano, mandrindra fandefasana fandefasana entana ny trano fijerena ary mijery ny habakabaka an-tsehatra amin'ny fivoahana rehetra, drafitra ary mitarika ...
Mpitantana mpamokatra / mpitantana ny lalana
Comments Off momba ny Production Manager / Road Manager
Mills Entertainment dia mitady olona mavitrika hanohanana ilay fampisehoana mivantana sy famokarana teatra amin'ny anjara asan'ny Manager Manager. Mills Entertainment no mpitarika ny indostrian'ny fialamboly mivantana sy fialamboly mivantana. Niara-niasa tamin'ireo mpanakanto ambony sy mpiara-miombon'antoka afa-po izahay izahay mba hamokatra sy hampiroboroboana fanaovana varotra amin'ny teatra, casino, ary oniversite manerana an'i Etazonia sy iraisam-pirenena. Mivoatra haingana dia haingana isika ary mitady mpangataka miavaka amin'ny firehetana ny indostrian'ny fialam-boly mivantana ary maniry ny hiditra amin'ny ekipa mpandresy. Ny andraikitry ny laharana voalohany dia ny: - fikarohana, firotsahana ary fiambenana mpivarotra famokarana amin'ny faritra mitety faritra ...
Production Coordinator - Touring
Comments Off momba ny Production Coordinator - fitsidihana
Mills Entertainment dia mitady olona mavitrika hanohanana ny fampisehoana mivantana sy famokarana teatra amin'ny anjara asan'ny mpandrindra Production. Mills Entertainment no mpitarika ny indostrian'ny fialamboly mivantana sy fialamboly mivantana. Niara-niasa tamin'ireo mpanakanto ambony sy mpiara-miombon'antoka afa-po izahay izahay mba hamokatra sy hampiroboroboana fanaovana varotra amin'ny teatra, casino, ary oniversite manerana an'i Etazonia sy iraisam-pirenena. Mivoatra haingana dia haingana isika ary mitady mpangataka miavaka amin'ny firehetana ny indostrian'ny fialam-boly mivantana ary maniry ny hiditra amin'ny ekipa mpandresy. Ny andraikitry ny laharana voalohany dia: - Ampio ny mpiandraikitra ny fizahantany amin'ny famonoana mivantana an-toerana ...
Filoha lefitra, Post Production
Comments Off amin'ny filoha lefitra, Production Production
Mamorona, fampiharana sy fanaraha-maso ny fanovana ny fandaharam-potoana sy teti-bola ho an'ny horonantsary mizara WB rehetra. Ny fiarahana amin'ny fizarana an-trano sy iraisam-pirenena dia manome ny sarimihetsika ilaina sy / na singa nomerika ilaina amin'ny fanaterana an-trano toy ny Etazonia, Canada ary ny espaniola miteny Etazonia. Manampy izany, mamindra ny sarimihetsika ilaina sy / na ny singa nomerika sy ny fifangaroana fanamafisam-peo takiana amin'ny fametrahana Subtitling, handika sy fanaovana dubbing ho an'ny faritany iraisam-pirenena. Niresaka momba ny fifampiraharahana ary nanakarama ny mpanonta sy ny mpiasan'ny mpanonta, anisan'izany ny mpanara-maso ny famoahana azy ireo. Manara-maso ny tonian-dahatsoratra sy ny mpikarakara ny fanamafisam-peo ary ny tonian-dahatsoratry ny Music. Amin'ny ankapobeny dia misy manodidina ny mpiasa 15-20 isaky ny horonantsary. Manomboka sy mankasitraka ny tolotra rehetra sy ny vola any ivelany ...
Page 2,328 ny 2,329«First...2,3002,3102,320«2,3252,3262,3272,3282,329»